အမှတ်မှားကြတဲ့ သိပ္ပံပညာ ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
5/08/2014 05:57:00 am ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
“ဓာတုဗေဒနဲ့ ပတ်သက်လို့သာ ပြောရတာပါ။ ကျွန်တော် မပြောချင်ဘူး ဆရာညိုရေ”
ကိုဘသစ်ထံ ကျွန်တော်ရောက်တော့ သူက ညည်းတွားနေတာကို တွေ့ရတယ်။
“သိပ္ပံပညာကို ကျွန်တော်တို့က သစ္စာရှိကြရတယ်။ မှားလို့မရတာတွေ အများကြီးရှိတယ်”
“ဒါပေါ့။ ပညာရပ်ကို သစ္စာဖောက်လို့ မရဘူး။ ၀ိဇ္ဇာဘာသာရပ်မှာတော့ တို့တစ်တွေ့ အငြင်းပွားလို့ ရပေမယ့် သိပ္ပံဘာသာရပ်မှာတော့ မှားလို့မရဘူး။ ဓာတ်လိုက်ရင် ၀န်ကြီးလည်းသေ၊ သမ္မတလည်းသေ။ သူတောင်းစားလည်း သေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အမှားအချို့ကိုတော့ သည်းခံလို့ ရကောင်းပါတယ်”
“ဟုတ်ကဲ့။ ဂျာနယ်လစ်တွေကတော့ လုပ်တတ်ကိုင်တတ် လာကြတယ်။ သူတို့က ပညာရှင်တွေကို မေးထားတာကို ပြောတာပါ။ အဲဒီ ပညာရှင်တွေကလည်း ဒေါက်တာ (ဆရာဝန်၊ ပါရဂူ) တွေဆိုတော့ အမှားတွေ ပြောလို့မသင့်ဘူး”
“သူတို့ ယူထားတဲ့ဘွဲ့တွေဟာ ပညာရဲ့ အထိမ်းအမှတ်တွေလေ။ သူတို့မသိဘဲ ရမ်းသန်းပြောတယ်ဆိုရင် သူတို့ကို အထင်သေးတာနဲ့ မပြီးဘူး။ ပညာကိုလည်း အထင်သေးတာပေါ့။ သူတို့ ပညာသင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေ နိုင်ငံတွေကိုလည်း အထင်သေးတော့တာပေါ့။ ခုဟာက “ဒေါက်တာ” ဆိုတဲ့ ဘွဲ့တွေကို ခံယူထားတဲ့လူတွေ ပြောတာတွေပါ”
“သူတို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ သူတို့ပြောတာက ဘာအကြောင်းအရာတွေ ပါလို့လဲ”
“Themos ဆိုတဲ့ ရေနွေးဓာတ်ဘူး အကြောင်းပါ။ မြန်မာတွေ အများစုကတော့ ဓာတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ Themos Flask အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်နေတယ်။ ရေနွေးဓာတ်ဘူးအကြောင်း မှားပြောကြတာပါ”
“ဒီအကြောင်းကတော့ ပညာရှင်တွေရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်တာနက်ထဲဝင်ပြီး Wikipedia လို စွယ်စုံကျမ်းမှာ Themos ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ကာကြည့်လိုက်ရင် ရတာပါပဲ။ အနောက်တိုင်းလို ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာတော့ ဓာတ်ဘူးအကြောင်းကို မူလတန်း ကလေးကအစ သိပါတယ်။ သူတို့ ဘာတွေပြောလို့လဲ”
“တိတိကျကျ ပြောမှဖြစ်မယ် ဆရာညိုရေ။ ခင်ဗျားကရေးလိုက်ရင် ပြဿနာတက်နိုင်တယ်။ အကြောင်းကတော့ ယခုနှစ် ဧပြီ ၃၀ ရက်ထုတ်တဲ့ နေ့စဉ်သတင်းစာတစ်စောင်မှာ ရေးထားတာပါ။ ခေါင်းစဉ်က “ဓာတ်ဘူးအတွင်း ကြာရှည်ထားသည့် ရေကျက်အေးကို သောက်သုံးခြင်းသည် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသော ယူဆချက် မှားယွင်းနေဟုဆို” ဖြစ်တယ်”
“ဒါမမှားပါဘူး။ သူတို့သုံးယောက် ဆွေးနွေးထားတယ်။ အဲဒီ သူတို့သုံးယောက်လုံးပြောတဲ့ စကားတွေကို နားထောင်ကြည့်ပါဦး။ ဓာတ်ဘူးတွေအထဲမှာ Silver Mirroring လုပ်ထားတာကို ပြဒါးပါတယ်လို့ ပြောနေကြလို့ပါ။ Silver ဆိုတာ Ag ပါ။ ပြဒါး (မာကျူရီ) Hg ပါ။ Ag နဲ့ Hg က တခြားဆီပါပဲ။
“ဒါက မြန်မာတွေ အမှတ်မှားတဲ့ ကိစ္စပါ။ ကြည့်မှန်တွေမှာ Silver Mirroring လုပ်တာကို ပြဒါးသုတ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အချို့ စာအုပ်တွေကလည်း ဒီလိုပဲရေးတယ်။ ဒီတော့ ဓာတ်ဘူးမှာလည်း ပြဒါးသုတ်တယ်ပဲ ပြောလေ့ရှိတာကိုး”
“သာမန်လူတွေ အမှတ်မှားတာကိုတောင် ပြန်တည့်ပေးရမယ့် ခေတ်ပါ။ ဒီခေတ်ဟာ ပညာခေတ် (knowledge Age) ပါ။ ဒေါက်တာဆိုတဲ့သူတွေ မှားတာကတော့ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိအောင် ဖြစ်နေပါတယ်”
“နေပါဦး။ ဒီသုံးယောက် ဘာတွေပြောလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းပြောပါဦး”
“ပထမတစ်ယောက် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက အကြီးစားပါ။ သူပြောတာက ‘ပြဒါးက ရေနွေးနဲ့ မထိပါဘူး။ အပြင်မှာ သုတ်ထားတဲ့အတွက် ရေကဘယ်လောက်ကြာကြာ အန္တရာယ်ရှိ ရှိပါဘူး’ တဲ့”
“သူက ‘ဒီလိုညသိပ် ရေနွေးသောက်လို့ အဆိပ်ဖြစ်ပြီး အစာအိမ်ထိခိုက်တာကတော့ ရေနွေးဓာတ်ဘူးထဲမှာ မာကျူရီဓာတ်တွေ၊ ပြဒါးဓာတ်တွေ အများကြီးပါလို့ ဖြစ်တာ’ တဲ့”။
“သြော်သြော်။ ဖြစ်ရလေ။ နောက်တစ်ယောက်က ဘာပြောလဲ”
“သူက ‘ဓာတ်ဘူးတွေမှာ မာကျူရီဓာတ် ၁၅ 15 ppb ပဲရှိရင် ဓာတ်ပြုဖို့ အင်မတန် နည်းပါတယ်။ လက်ဖက်ခြောက်ခတ်တဲ့ ရေနွေးထည့်ရုံနဲ့ စိုးရိမ်စရာ မရှိဘူး။ အက်စစ်တွေ ဗေ့တွေသုံးမှ မာကျူရီက ဓာတ်ပြုတာ။ ရေနွေးအဖြူဆိုရင် ပိုတောင်မဖြစ်ဘူး’ လို့ ပြောသွားတယ်”
“အင်း သူတို့သုံးယောက်တောင်ပြောတော့ ကျွန်တော်သိထားတဲ့ (Knowledge) တောင် ဘယ်ပျောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး”
“ဖော်ပြထားတဲ့ ဓာတ်ဘူးပုံကို ကြည့်ပါ”
“ဖန်ဘူးဟာနှစ်ထပ်။ လေဟာနယ် လုပ်ထားတယ်။ အထဲမှာ (Silvered) လုပ်ထားတယ်။ ကြည့်မှန်လိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပြဒါးသုတ်ထားတယ်လို့ အမှတ်မှားကြတာပါ”
“ကြည့်မှန်လည်း (Silvered) လုပ်ထားတာပဲ မဟုတ်လား။ မြန်မာတွေကသာ ပြဒါးသုတ်ထားတယ် ပြောတာလေ။ ပြဒါးက ဒီလိုသုတ်လို့ မရဘူး။ အငွေ့ပြန်ကုန်မှာပေါ့။ ပြီးတော့ (Silvered) လို့ နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ မှန်တွေမှာ ရေးထားတယ်”
“ကျွန်တော်က တက္ကသိုလ်မှာ အနှစ် ၂၀ ကျော် ဆရာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း ဒီလို Silver Mirror Test ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလန်မှာရှိစဉ်က ခရစ္စမတ် လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါ အလကားရတဲ့ အရက်ပုလင်းခွံ လှလှတွေကို (Silvered) လုပ်ပြီး မီးအုပ်ဆောင်းအတွက် ဒါမှမဟုတ် ပန်းအိုးထိုးကာ လက်ဆောင်ပေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း လာတောင်းကြတယ်။ ခုလောလောဆယ် Peru မှာကျောင်း ဆရာလုပ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူ Alan တင်ဝင်းနဲ့ အတူလုပ်ကြတာပါ”
“ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဓာတ်ဘူးမှာ ပြဒါးမပါတဲ့အတွက် ပြဒါးဆိပ် မသင့်ဘူးဆိုတာကို ရှင်းရှင်းသိအောင်တော့ ပြည်သူတွေကို အသိပေးဖို့ လိုတာပေါ့”
“မှန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ဒါကို ဆရာညို့ကို ရေးစေချင်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါကလည်း ဖြစ်ဖူးတယ်။ အဲဒါက နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုက ခဲတံကြော်ငြာတော့ သူတို့ခဲတံတွေဟာ ခဲဆိပ်မသင့်ဘူးဆိုပြီး ကြော်ငြာတယ်”
“ဒါကတော့ ဘယ်ခဲတံမဆို ခဲဆိပ်သင့်စရာ မရှိပါဘူး”
“ဟုတ်ပါတယ်။ ခဲတံတွေရဲ့ ခဲဆန်တွေဟာ Graphite နဲ့လုပ်ထားတာပါ။ ခဲ (Lead) မပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးက ခဲဆန်တွေကို ခဲ (Lead) လို့ပဲ ခေါ်ကြတာကိုး။ အမှတ်မှားကြတာပေါ့”
“ကျွန်တော်ကတော့ ပညာရှင်များကို မေတ္တာရပ်ခံချင်တယ်။ တတ်နိုင်သမျှ အမှားတွေကို မပြောကြပါနဲ့။ အမှားစကားကို အမှီပြုပြီး လိမ်ညာစားသောက်သူတွေက လူထုကို လှည့်ဖြားကြလို့ပါပဲ။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို တတ်နိုင်သမျှ လေ့လာကြပါ။ Little knowledge is dangerous. ဆိုတာ ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား”
“ခင်ဗျားပြောဖူးတဲ့ Integrity ဆိုတဲ့စကားဟာ Little knowledge is dangerous. ဆိုတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ် ကိုဘသစ်ရယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Integrity ဆိုတဲ့ အပြည့်အ၀ တတ်သိဖို့ အရေးကြီးတယ်”
“မှန်ပါတယ်။ သင်္ဘောအကြီးကြီးမှာ အပေါက်သေးသေးလေးဟာ အရေးမကြီးဘူးလို့ မထင်ပါနဲ့။ ဒါဟာ Integrity နဲ့ ဆိုင်တာကို သတိရကြဖို့ပါ”